Al-Shabaab oo galabta Baraawe ku toogtay Saraakiil ka tirsanaa oo ay ku eedeeyeen Jawaasiis – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 4 March 2014 4 April 2019
Mareeg.com-Al-Shabaab ayaa galabta ku toogtay degmada Baraawe saraakiil ka tirsanaa oo ay ku eedeeyeen inay ahaayeen jawaasiis, si toos ula shaqeynayay diyaaradaha Mareykanka ee duqeymaha ka fuliyay Soomaaliya.
Qoraal la soo dhigay barta Facebook ay ku leedahay Idaacada Al-Andulus ee Afka Shabaab ku hadasha ayaa lagu sheegay in saddexdan nin ay u basaasayeen sirdoonada reer galbeedka, dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Puntland.
Fagaare ku yaal degmada Baraawe ayaa ciidamo ka tirsan Shabaab oo wajiyada u xirnaa ay ku toogteen saddexda nin oo ka mid ahaa saraakiisha Al-Shabaab, balse ay ku eedeeyeen inay la shaqeynayee Sirdoonada reer galbeedka iyo diyaaradaha wax basaasa duqeymaha geysta.
Mid ka mid ah raga la toogtay ayaa lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdulle Geelle oo da’diisa aheyd 29-jir, isla markaana uu ahaa nin la shaqeynayay Ciidamadii Faransiiska ee sanadkii hore weeraray deegaanka Buulo Mareer, xilli ay doonayeen inay xoog ku soo furtaan muwaadin laga heystay.
Ninkan ayay sidoo kale ku eedeeyeen Al-Shabaab inuu la shaqeynayay diyaaradaha Drones loo yaqaano duqeynta ka geysta Soomaaliya, waxaana ay sheegeen inuu si gaar ah ugu lug lahaa weerarkii ka dhacay dhamaadkii sanadkii hore agagaarka deegaanka Jilib.
Sarkaalka labaad ayaa magaciisa lagu sheegay Axmed Cabdullaahi faroole oo da’diisa lagu sheegay 47-jir, waxaana lagu eedeeyay inuu ka mid ahaa waxa loogu yeeray ashahaado la dirirka Puntland u soo dirsadeen deegaanada Shabaab ka taliyaan.
Ninka saddexaad ayaa lagu eedeeyay inuu u basaasayay sirdoonka dowladda Soomaaliya ee fadhigooda yahay magaalada Muqdisho.
Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab ayaa sheegay in ragan iyaga ka mid ahaa uu Alle shartooda Umada ka qabtay, isla markaana ku hanjabay cid kasta oo u jaajuusta sirdoonada reer galbeedka iyo kuwa dowladda ay sidan oo kale u dambeyn doonto.
Diyaaradaha Drones ee aan duuliyaha laheyn ayaa bilihii u dambeeyay weeraro ay ka fuliyay deegaano ka tirsan Shabeelaha Hoose iyo Jubada Dhexe, kaasoo lagu dilay saraakiil sar sare oo Shabaabka ka tirsanaa.
Ma ahan markii u horeysay oo Al-Shabaab toogasho ku fuliyaan dadka ay ku eedeeyaan inay jaajuus yihiin ka tirsan, iyadoo horay deegaanada ay maamulaan uga dhacay xukuno ceynkan oo kale ah.